China ịmanye nri ịmanye igwe na - emepụta ihe na ngwaahịa | Igwe na-emepụta ihe
Ọ bụ silinda ígwè, nke a na-ejikarị ígwè alloy ma ọ bụ ihe nchara ígwè mejupụtara ya na ígwè alloy nke na-eguzogide okpomọkụ, na-eguzogide nrụgide dị elu, ike, na-eyi uwe na-eguzogide ọgwụ.
(2) gbọmgbọm: Ọ bụ silinda ígwè, nke a na-ejikarị ígwè alloy ma ọ bụ ihe nchara ígwè mejupụtara ya na ígwè alloy nke na-eguzogide okpomọkụ, na-eguzogide nrụgide dị elu, siri ike, na-eyi akwa, na-eguzogide ọgwụ. Gbọmgbọm ahụ na ihe nkedo ahụ kwekọrọ iji ghọta ngwepịa, ịdị nro, agbaze, plasticizing, iyuzucha na mkpakọ nke plastik, na nnyefe na-aga n'ihu na nke edo edo nke usoro ịkpụzi. N'ozuzu, ogologo gbọmgbọm ahụ bụ 15-30 ugboro nke dayameta ya, nke mere na plastic ahụ na-ekpo ọkụ zuru oke ma bụrụ plasticized dị ka ụkpụrụ.
(3) Hopper: A na-etinye ala nke hopper na ngwaọrụ egbutu iji dozie ma belata ihe onwunwe ahụ. Ejiri ihe mkpuchi na oghere anya na ngwaọrụ mmezi.
(4) Igwe isi na ebu: Isi igwe igwe bu ihe eji eme ihe di iche iche na ihe ndi ozo. Isi igwe ejikere ihe agha. Ọrụ nke isi igwe bụ ịgbanwe plastik na-agbanwegharị na-agagharị agagharị, nke dị n'otu ma kwụsie ike. Duru na aka uwe ahụ, ma nye plastik nrụgide nrụpụta dị mkpa. A na-etinye plastik ahụ na kọmpụta na gbọmgbọm ahụ, na-asọba n'ime nkedo ahụ nke ịnwụ site n'olu nke ịnwụ site na mpempe akwụkwọ ntanetị na-agagharị n'okporo ụzọ ụfọdụ. The die isi na-anwụ anwụ aka uwe na-ekwesị ekwekọghị na-etolite ihe annular ọdịiche na a mbelata cross-ngalaba, nke mere na plastic gbazee bụ A na-aga n'ihu na oké tubular mkpuchi na-guzobere gburugburu isi waya. Iji hụ na ụzọ ntụgharị plastik na-anwụ na ezi uche ma wepu nkuku nwụrụ anwụ nke plastik a gbakọtara, a na-etinyekarị aka uwe shunt. Iji wepu mgbali fluctuations n'oge plastic extrusion, a mgbali equalizing mgbanaka na-arụnyere.
(5) Igwe akụrụngwa bụ isi na-anabata kpo oku eletrik, mmiri jụrụ mmiri na-ejikwa akpaghị aka na-achịkwa okpomọkụ. Scghasa isi nwere ike mma mmiri (mmanụ) ịchịkwa ịghasa okpomọkụ. Ejiri igwe akụrụngwa nwee ihe nrụgide nrụgide maka ịlele agbaze agbaze na nrụgide.
Igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-atụsi ike, igwe enyemaka inyeaka, na mma na-agbanwe agbanwe na-ebugharị site na moto AC, ntụgharị ọsọ ọsọ ọsọ; akpịrị ịkpọ nkụ usoro ihicha usoro mejupụtara centrifugal dehydrator, drum vibrating ihuenyo, ifufe-blown nchekwa bin na na.
1. The otu-ịghasa granulator integrates erute, nri, extrusion, ikuku-mma na-ekpo ọkụ pelletizing, na ikuku-oriri jụrụ iji ghọta akpaka na-aga n'ihu ọrụ. Dị otú ahụ a otu-ịghasa granulator nwere nnukwu mmepụta arụmọrụ;
2. Otu-ịghasa granulator nwere esịtidem inggwakọta, udia na extrusion ngalaba. Dịka nhọrọ ndị ahịa si dị, a pụrụ iji kpo oku ọkụ eletriki ma ọ bụ kpo oku mmanụ ọkụ ọkụ. Dika ihe ichoro icho onodu oku, ihe ndi ozo choro dabere na ihe di iche iche eweputara. Dị iche.
3. The igwekota adopts na nkà na ụzụ nke "anọ kwadoro synchronous eyi na-eguzogide inggwakọta ulo", nke nwere elu arụmọrụ, ala ike oriri, zuru ezu plasticization na edo mgbasa;
4. The nri ngwaọrụ adopts ụlọ ọrụ pụrụ iche technology, nke nwere ike inyere mixgwakọta nke mbuaha ihe na ịmanye nri nke otu ịghasa extruder ka mma arụmọrụ na àgwà nke granulation;
5. Ma abụọ cone ịghasa na otu ịghasa na-chụpụrụ site AC ugboro akakabarede technology, nke nwere ike imeghari dị iche iche na nkà na ụzụ chọrọ;
6. Ihu igwe isi na-ejide ihe eji agbanwe ngwa ngwa ngwa ngwa nke hydraulic, nke na-echekwa oge na mgbalị ma na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma;
7. The granulator adopts a rotary cutter isi na a mma-n'iji ya gee ntị ngwaọrụ maka ikuku-mma na-ekpo ọkụ granulation;
8. The jụrụ nke pellets adopts cyclone separator erute na drum oyi ma ọ bụ diski vibrating ihuenyo;
9. Usoro nchịkwa eletriki na-ewepụta PLC, ntanetị anya na teknụzụ ntụgharị ugboro ugboro iji ghọta usoro njikwa akpaka zuru ezu.